အနုပညာ – VOM News
ပွညျမွို့က ပုလငျးပနျးခြီပညာရှငျ ကိုဇငျမောငျတာ
ပွညျ၊ ဇနျနဝါရီ ၂၇-၂၀၂၀ ဂနျြကိုးလျ(VOM) ပွညျမွို့က ပုလငျးပနျးခြီတှရေေးဆှဲတဲ့ ကိုဇငျမောငျတာဆိုသူဟာ ပုလငျးပုံစံအမြိုးမြိုးထဲကို ဆီဆေးပနျးခြီထညျ့သှငျးရေးသားတဲ့အကွောငျးကို VOMရဲ့ဝိုငျးတျောသား ဂနျြကိုးလျကနေ ရိုကျကူးတငျဆကျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ကိုဇငျမောငျတာတယောကျဟာ မွနျမာပွညျအနှံ့က ပုလငျးပနျးခြီပညာရှငျတှနေဲ့စုစညျးပွီး အနုပညာပွပှဲတဈခုတငျဆကျဖို့ ဆန်ဒပွငျးပွနပွေီး အဲ့ဒီပွပှဲက ရရှိတဲ့ အကြိုးအမွတျကိုလညျး မိဘမဲ့ကလေးတှအေတှကျ လှူဒါနျးဖို့အတှကျ စီစဉျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ #VOM #voiceofmyanmar #ပွညျ #ကိုဇငျမောငျတာ #ပုလငျးပနျးခြီ Zawgyi ပြည်မြို့က ပုလင်းပန်းချီပညာရှင် ကိုဇင်မောင်တာ ပြည်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇-၂၀၂၀ ဂျန်ကိုးလ်(VOM) ပြည်မြို့က ပုလင်းပန်းချီတွေရေးဆွဲတဲ့ ကိုဇင်မောင်တာဆိုသူဟာ ပုလင်းပုံစံအမျိုးမျိုးထဲကို ဆီဆေးပန်းချီထည့်သွင်းရေးသားတဲ့အကြောင်းကို VOMရဲ့ဝိုင်းတော်သား ဂျန်ကိုးလ်ကနေ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇင်မောင်တာတယောက်ဟာ မြန်မာပြည်အနှံ့က ပုလင်းပန်းချီပညာရှင်တွေနဲ့စုစည်းပြီး အနုပညာပြပွဲတစ်ခုတင်ဆက်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြနေပြီး အဲ့ဒီပြပွဲက ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကိုလည်း မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် လှူဒါန်းဖို့အတွက် စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ #VOM…
ဂြုံအရုပျပညာနဲ့ အသကျမှေးသူ ကိုစနျးဦး
Unicode ဂြုံအရုပျပညာနဲ့ အသကျမှေးသူ ကိုစနျးဦး မန်တလေး ၈၄ လမျးပျေါက ကလေးဆေးခနျးတခုရှမှေ့ာ ဂြုံနဲ့လုပျတဲ့ အရုပျကလေးတှကေို ကိုယျတိုငျလုပျရောငျးသူတယောကျရဲ့ ဝငျငှဟော တရကျကို အနညျးဆုံး ကပျြတဈသောငျးခှဲကနေ ၂သောငျးထိရှိတယျဆိုရငျ သငျယုံမလား ? ကလေးတှစေိတျဝငျစားတဲ့ အရုပျလေးတှကေို အန်တရယျကငျးအောငျနဲ့ လှပအောငျလုပျတတျဖို့ကလညျး အခြိနျ ၂နှဈလောကျယူပွီး ပညာဆညျးပူးခဲ့ရပါတယျတဲ့။ ဒီရုပျလေးတှလေုပျရောငျးပွီး အသကျမှေးဝမျးကြောငျးနတေဲ့ ကိုစနျးဦးကို မေးမွနျးပွီး ကိုနလေငျးက ရိုကျကူးတငျဆကျထားပါတယျ။ #voiceofmyanmar #ဂြုံအရုပျ zawgyi ဂျုံအရုပ်ပညာနဲ့ အသက်မွေးသူ ကိုစန်းဦး မန္တလေး ၈၄ လမ်းပေါ်က ကလေးဆေးခန်းတခုရှေ့မှာ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ အရုပ်ကလေးတွေကို ကိုယ်တုိုင်လုပ်ရောင်းသူတယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေဟာ တရက်ကို အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သောင်းခွဲကနေ ၂သောင်းထိရှိတယ်ဆိုရင် သင်ယုံမလား ? ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ အရုပ်လေးတွေကို အန္တရယ်ကင်းအောင်နဲ့ လှပအောင်လုပ်တတ်ဖို့ကလည်း အချိန် ၂နှစ်လောက်ယူပြီး ပညာဆည်းပူးခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ဒီရုပ်လေးတွေလုပ်ရောင်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေတဲ့…
ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို, နည်းပညာ, အနုပညာ, ဆောင်းပါး
အကောက်တောင် နံရံပန်းပုရုပ်ပွားတော်များပျက်စီးမှာစိုးရိမ်နေရ ပန်းတောင်း-နိုဝင်ဘာ၁၇-၂၀၁၉ ဂျန်ကိုးလ်(VOM) အကောက်တောင်လို့လူသိများတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါး ကျောက်နံရံတွေမှာထွင်းထုထားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ထိမ်းသိမ်းမှု့အားနည်းတာကြောင့် ပျက်စီးပျောက်ကွယ်မှာကို ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ နံရံထွင်းပန်းပုလက်ရာတွေဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေဟာအရင်ကထောင်ကျော်ရှိပေမဲ့အခုအခါမှာသုံးရာခန့်သာရှိတော့လို့သိရပါတယ်။ “နှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှသဘာဝဒဏ်ခံလာရတဲ့အခါမှာတစ်ချို့ရုပ်ပွားတော်တွေကတော့အကုန်လုံးပဲ့သွားတယ်ပေါ့နည်းသွားတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တော့သုံးရာတောင်ရှိချင်မှရှိတော့မယ်။ တနှစ်ထက်တစ်နှစ်ပေါ့။နည်းပညာနဲ့ရှေးမူမပျက်ပြုပြင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါပြီနည်းနည်းတောင်နောက်ကျနေပြီလိုထင်ပါတယ်”လို့အကောက်တောင်ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဌဦးမြင့်သိန်းကပြောပြပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းကြံခင်းမြို့နယ်နှင့်ပဲခူးတိုင်းထုံးဘိုနယ်အစပ်ဧရာဝတီမြစ်ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့အဆိုပါအကောက်တောင်ရှိရုပ်ပွားတော်တွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ “ဒီဘက်မှာခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာတော့ဒေသခံတွေလည်းအဆင်ပြေတာပဲအကောင်တောင်ကိုအမှီပြုလုပ်ပြီးလုပ်စားရတာပေါ့ဒါပေမယ့်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းကျအားနည်းနေတော့အဲတာတွေသေချာဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်”လို့ထုံးဘိုမြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။ အကောက်တောင်ဟာ ဧရာဝတီတိုင်းကြံခင်းမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်သော်လည်း ပဲခူးတိုင်း ထုံးဘိုမြို့ကနေ သွားရောက်ဖို့ လမ်းသာတာမို့ ထုံးဘိုမြို့နဲ့တွဲဘက်ကာပြည်တွင်းပြည်ပဘုရားဖူးများလေ့လာသူတွေ နွေမိုးဆောင်းမပြတ်ခရီးသွားတွေ ဝင်ရောက်နေတဲ့နေရာတခုဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကနေလာမယ်ဆိုရင် ပြည်မြို့ရဲ့ တဖက်ကန်းကို ကူးပြီး ဥသျှစ်ပင်ကတဆင့် ပုသိမ်မုံရွာလမ်းမပေါ်က သွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ #voiceofmyanmar #ရန်ကုန်တိုင်း #ဧရာဝတီတိုင်း #အကောက်တောင် #ရုပ်ပွားတော်တွေပျက်စီး Unicode အကောကျတောငျ နံရံပနျးပုရုပျပှားတျောမြားပကျြစီးမှာစိုးရိမျနရေ ပနျးတောငျး-နိုဝငျဘာ၁၇-၂၀၁၉ ဂနျြကိုးလျ(VOM) အကောကျတောငျလို့လူသိမြားတဲ့ ဧရာဝတီမွဈကမျးပါး ကြောကျနံရံတှမှောထှငျးထုထားတဲ့ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောတှကေို ထိမျးသိမျးမှု့အားနညျးတာကွောငျ့ ပကျြစီးပြောကျကှယျမှာကို ဒသေခံတှစေိုးရိမျနကွေပါတယျ။ နံရံထှငျးပနျးပုလကျရာတှဖွေဈတဲ့ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောတှဟောအရငျကထောငျကြျောရှိပမေဲ့အခုအခါမှာသုံးရာခနျ့သာရှိတော့လို့သိရပါတယျ။ “နှဈကွာလာတာနဲ့အမြှ…
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု, သတင်း, အနုပညာ, မြန်မာသတင်း
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွေကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာရောင်းချနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ သရုပ်ဆောင်ဇာဏ်ခီပြော
ပြည်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈-၂၀၁၉ လမင်း (VOM) ယခုလက်ရှိမြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွေဟာ နိုင်ငံတကာကရုပ်ရှင်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ငွေသုံးစွဲမှု့အားနည်းသလို စံချိန်တွေလည်းကျနေတယ်လို့ ဝေဖန်တာတွေများနေတဲ့အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွေကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေပြီလို့ ပြည်မြို့က မင်္ဂလာသီရီရုပ်ရှင်ရုံမှာ ထာဝရနှောင်ကြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဇာတ်ခီက ပြောပါတယ် ။ “အစထဲကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဘဲ မြန်မာရုပ်ရှင်ကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာရောင်းချနိုင်ရေးပေါ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကကြမ်းတယ်၊ တော်ရုံတန်ရုံကောင်းယုံနဲ့ရောင်းစားလို့မရဘူး၊ ကျွန်တော်တို့မှန်ထားတာကတော့ ဈေးကွက်မှာရောင်းချနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင် မှန်းထားပါတယ်” လို့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဇာတ်ခီကပြောပါတယ် ။ “ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျတော်တော်လေးကိုမျက်ရည်ကျမိတယ် ရုံထဲမှာဆိုးလည်းငြိမ်နေတာဘဲပရိတ်သတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုစောင့်ကြည့်နေကြတာ ဘာသံမှမကြားရဘူး၊ ထာဝရနှောင်ကြီုးဇာတ်ကားကြီးက ရသမျိုးစုံကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လို့ နောက်ကိုလည်း ခုလိုရသစုံလင်ပြီး ပရိတ်သတ်ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးတွေမျှော်လင့်နေတယ် ” လို့ ထာဝရနှောင်ကြိုးရုပ်ရှင်ကို လာကြည့်တဲ့ ဒေါ်အေးအေးပြုံးကပြောပါတယ်။ ထာဝရနှောင်ကြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် ဒီလိုမျိုးအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွေကို ပဲခူး၊တောင်ငူ၊နေပြည်တော်၊ပျဉ်းမနား၊ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊မုံရွာ၊မိတ္ထီလာ၊မကွေး နဲ့ ပြည်မြို့တွေမှာ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်…
Zawgyi ဆိုးလ်၊ အောက်တိုဘာ-၁၅-၂၀၁၉ မျိုးဆက် (VOM) တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကေပေါ့စတားတစ်ဦးဖြစ်သူ f(x) တေးဂီတအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဆူလီဟာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ ဆူလီရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့အနီးရှိနေအိမ်မှာ သူ့ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သူက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ဆူလီ သေဆုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကေပေါ့စတား ဆူလီဟာ သူရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ f(x) တေးဂီတအဖွဲ့ကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဝေဖန်နှောက်ယှက်မှု တွေခံခဲ့ရတာကြောင့် ကေပေါ့အဖွဲ့မှာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလို့ အချို့ကယုံကြည်နေပါတယ်။ ဆူလီဟာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတွေမှာလည်း လူသိများခဲ့ပြီး…
ကမ္ဘာ့သတင်း, သတင်း, အနုပညာ
ပြည် ဇူလိုင်၃၀-၂၀၁၉ ဂျန်ကိုးလ်(VOM) ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မှာရှိတဲ့ကမ္ကာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် သခေတ္တရာပျူမြို့ဟောင်းအတွင်းက မြို့ရိုးအပိုင်းအစတခုဟာ မိုးသည်းစွာရွာလို့ ဇူလိုင်၃၀မနက်ကပြိုကျသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ ဒီမြို့ရိုးဟောင်းဟာ အရှေ့ဘက်နန်းမြို့ရိုး ဖြစ်ပြီးပေသုံးဆယ်ခန့် ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကို ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန ကမ္ကာ့အမွေအနှစ် ဌာနခွဲ သရေခေတ္တရာဌာနစုက သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ “မနေ့က မိုးတအားရွာတယ် တစ်ညလုံးရွာတယ် ဒီရှေးဟောင်းဇုံထဲမှာလည်းရွာတယ်။ အဲလိုရွာတဲ့အခါမှာ မနက် လေးနာရီနဲ့ ငါးနာရီကြားမှာ အရှေ့ဘက်နန်းမြို့ရိုး ပေသုံးဆယ်လောက် ကွာကျသွားတယ်။ မကွာခင်မှာလည်း ဒါကြီးက ဖောင်းနေတယ် ဒီဟာကိုလည်း ထိန်းသိမ်းဖို့ ဘတ်ဂျက် တင်တောင်းထားတာ ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းက တောင်းထားတာပေါ့နော်။ ဘတ်ဂျက်က မကျသေးဘူး မကျသေးခင်မှာလည်း ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါ”လို့ကမ္ကာ့အမွေအနှစ် ဌာနခွဲ သရေခေတ္တရာဌာနစုမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်မျိုးဝင်းကပြောပြပါတယ်။ ဒီမြို့ရိုးဟာအရှေ့ဘက်နန်မြို့ရိုးမှာ အမြင့် ၇ ပေခန့်မြင့်မားပြီး အရှည်ပေ ၅၀၀ခန့်ရှိကြောင်းနဲ့ယခုမိုးရာသီတွင် ထပ်မံ၍ မိုးရက်ဆက်ရွာသွန်းရင်…
ခရီးသွား, ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု, သတင်း, အနုပညာ, မြန်မာသတင်း
အသက်​အရွယ်​အရ ငယ်​တဲ့ဇာတ်​ရုပ်​မရိုက်​ချင်​​တော့ဘူးဆိုတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၁-၂၀၁၉ သင်းသဒ္ဒါ(VOM) ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုရထားတဲ့ အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အသက်​အရွယ်​အရ ငယ်​တဲ့ ဇာတ်​ရုပ်​ မရိုက်​ချင်​​တော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ”အူဝဲထင်တာကတော့ ဒီကြားမှာ ဇာတ်ကြမ်းသလိုဖြစ်တဲ့ ဒေါင်းနီလို ကာရိုက်တာမျိုးတွေ၊ ဒရမ်မာဇာတ်တွေ ရိုက်တာ နည်းနည်းများသွားတယ်ဆိုတော့ အဲလို ရို့မန့်ဇာတ်တွေကို ကြည့်ချင်လာကြတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်က ရို့မန့်ဇာတ်ကို တောင်းတာမျိုးတွေ တွေ့ရပေမယ့် ကိုယ့်အသက်အရွယ်အရ ငယ်တဲ့ ဇာတ်ကို မရိုက်ချင်တော့ဘူး။”လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းပုံစံဖြစ်တဲ့ ”ဇာတ်လိုက်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မြင့်မြတ်၊ ခိုင်သင်းကြည် ၊ မေမြင့်မိုရ် စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ နယ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရိတ်သတ်တေ တောင့်တနေတဲ့ ရို့မန့်ကားတွေကို ဇာတ်လမ်းအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လက်ခံသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ”ဒီကြားထဲမှာ…
သတင်း, အနုပညာ, မြန်မာသတင်း
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို ဒီနှစ်ထဲမှာ သေချာပေါက်ရိုက်မယ်
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၈-၂၀၁၉ သင်းသဒ္ဒါ(VOM) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်ကို ဒီနှစ်ထဲမှာ သေချာပေါက်ရိုက်မယ်လို့ ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ တာဝန်ယူထားတဲ့ အကယ်ဒမီလူမင်းက ပြောပါတယ်။ ”ကိုယ့်ကတော့ ရိုက်ချင်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်စရာတွေ အရမ်းများနေလို့ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးတာပါ။ ဒီ နှစ်ထဲမှာတော့ သေချာပေါက် ရိုက်မှာပါ။ မဖြစ်ဖြစ်အောင် သေချာပေါက် အကောင်းအထည်ဖော်မှာပါ။”လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ ရွေးချယ်ရာတွေမှာ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပြီးရုံနဲ့ ရိုက်လို့မရသေးသလို တခြားအထင်ကရ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အသုံးပြုမယ့် လူသူအင်အား၊ လက်နက်အင်အားတွေအတွက်လည်း ခက်ခဲနေတာပါ။ အဲဒီ ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ”ဒီဘက်ခေတ်က မြင်ကွင်းတွေလို ဟိုးဘက်ခေတ် မြင်ကွင်းဖြစ်အောင် ကွန်ပျူတာ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ်။ ပြင်ဆင်မှု အပိုင်းတွေက ခုထိမပြီးနိုင်သေးလို့…
မိဘစိတ်တိုင်းကျတဲ့ သူကိုပဲ အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ရွေးမယ်ဆိုတဲ့ ရတနာမိုင်
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၇-၂၀၁၉ သင်းသဒ္ဒါ(VOM) အသံချိုချိုလေးနဲ့ ပရိသတ်ကို စွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ရတနာမိုင်ကတော့ မိဘစိတ်တိုင်းကျတဲ့ သူကိုပဲ အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ရွေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ”ညီမက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ယောက်ျားတော့ ရွေးချယ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ မိဘတွေစိတ်တိုင်းကျ သဘောကျတဲ့ သူမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်ဖြစ်မှာပါ။”လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမကတော့ မိခင် မိုင်နဲ့ အတူ Two Lady Show လုပ်မယ်ပြောပြီး မလုပ်ဖြစ်သေးတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကို ကတိပျက် သလိုဖြစ်နေရကြောင်းနဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ သေချာပေါက် ကျင်းပဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Two Lady Show ထက် မိခင်ဖြစ်သူ မိုင် ဖြစ်စေချင်တဲ့ သူမအမေရဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ပိုပြီးအမှတ်ရသွားအောင် အခွေထုတ်ပေးဖို့ အရင် ဆုံးကြိုးစားဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးတော့ ရတနာမိုင်က…